IceCure Medical abanyela na nkwekọrịta nkesa mbụ ya na Mobile SCANMED Systems SP. z oo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » IceCure Medical abanyela na nkwekọrịta nkesa mbụ ya na Mobile SCANMED Systems SP. z oo
IceCure Medical Ltd., onye na -emepụta ọgbọ na -abịa obere teknụzụ cryoablation na -emebi emebi akpụ site na ntu oyi, kwupụtara taa na ya abanyela na nkwekọrịta nkesa mbụ ya na Mobile SCANMED Systems SP. z oo ka erere naanị ProSense System Cryoablation System na ihe mkpofu na Poland. N'ime ọnwa iri na abụọ nke bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkesa mbụ, ndị otu a na-atụ anya ịbanye na nkwekọrịta nkesa ogologo oge.
"Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa nkwekọrịta mbụ na Mobile SCANMED Systems iji kesaa sistemụ ProSense Cryoablation anyị na Poland, na -agbasawanye iru anyị na European Union (" EU "), ebe a kwadoro usoro anyị ugbu a n'okpuru akara CE. Nkwekọrịta a na -ewulite na netwọ nkesa nke anyị hibere n'afọ gara aga, ọ bụkwa akụkụ nke ebumnuche anyị iweta teknụzụ a na mpaghara niile, "Eyal Shamir, onye isi ọrụ IceCure kwuru. “Amaara usoro nlekọta ahụike Poland maka inye ọgwụgwọ ọrịa kansa dị elu yana ịnabata ọgwụgwọ na teknụzụ ọhụrụ. Ka ọrịa kansa na -aga n'ihu na -abụ otu n'ime ụdị ọrịa kansa kachasị n'etiti ụmụ nwanyị Poland, yana ụmụ nwanyị 24,644 kọrọ na 20201, Poland esonyela na mbọ zuru ụwa ọnụ ịbawanye nyocha nke ọrịa ara ure iji chọpụta ma gwọọ ndị ọrịa na ọkwa mbụ. Anyị kwenyere na mkpọsa a dabara nke ọma n'ikike sistemụ anyị nwere ịgwọ ndị ọrịa n'oge na -enweghị ịwa ahụ site na ibibi etuto ọjọọ. Na mgbakwunye, teknụzụ anyị na -enyekwa obere ihe mgbochi ọzọ maka ịwa ahụ maka ịgwọ ọrịa kansa na akụkụ ndị ọzọ, gụnyere akụrụ, ngụgụ na ọkpụkpụ. ”
“Ndị otu Mobile SCANMED Systems na -aga n'ihu na -ebuga ozi anyị iji nye ndị na -ahụ maka ahụike Poland ohere teknụzụ kachasị mma na teknụzụ kachasị ọhụrụ sitere gburugburu ụwa. Nkwekọrịta nke taa ga -ewetara teknụzụ cryoablation ọhụrụ nke ProSense Cryoablation System nye ndị ọrịa kansa ara n'ofe Poland. Sistemụ Cryoablation ProSense nwere ike ibibi etuto ahụ n'enweghị nsogbu, ngwa ngwa, na enweghị mgbu, na -enweghị mkpa ịwa ahụ, ”Marcin Weksler, Onye isi oche nke Mobile SCANMED Systems kwuru.
N'okpuru usoro nkwekọrịta nkesa mbụ, Mobile SCANMED Systems ga -ahụ maka ileba anya n'ihe niile achọrọ iji ree Sistemụ Cryoablation ProSense na Poland. Sistemụ ekwentị mkpanaaka nwere ike ree na Poland ngwaahịa ProSense Cryoblation Sistemụ ngwaahịa na ihe eji azụta n'aka IceCure. Mgbe ị binyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkesa mbụ, Mobile SCANMED Systems ga -enyekwa iwu ịzụta mbụ nke ruru $ 100,000.
Mfe, amụma amụma na igodo bara uru maka...
Anwansi Kenya maka ndị dike njem nlegharị anya ọhụrụ na WTM London site na…
Ice Cube Man Vs Machine: Nke mbụ NFT Drop
Pfizer-BioNTech COVID-19 akwadoro maka ụmụaka...
Usoro ọhụrụ dị ize ndụ na Germany: Mwakpo mma